uWanda (Isizulu) – Bridge Books add wishlist show wishlist remove wishlist add compare show compare remove compare preloader
uWanda (Isizulu) Booksite Afrika
Category: Children's, Fiction, isiZulu, New & newly arrived books
Nangu uWanda, nezinwele zakhe ezinhle eziyisihluthu. Unesibindi namandla, kodwa akeneme ngenxa yokuhlale echukuluzwa ngabafana esikoleni. Ngenxa yezimfihlo zikaMakhulu zezinwele nezindaba zakhe, uyakuthokozela ukuthi izinwele zakhe zingumqhele nento angaqhosha ngayo. Le ncwadi ingokuzazi nobuhle, incoma iqholo ngamasiko nokuthi lifundwa kanjani futhi ledlulselwa kanjani esizukulwaneni esilandelayo. } Nangu uWanda, nezinwele zakhe ezinhle eziyisihluthu. Unesibindi namandla, kodwa akeneme ngenxa yokuhlale echukuluzwa ngabafana esikoleni. Ngenxa yezimfihlo zikaMakhulu zezinwele nezindaba zakhe, uyakuthokozela ukuthi izinwele zakhe zingumqhele nento angaqhosha ngayo. Le ncwadi ingokuzazi nobuhle, incoma iqholo ngamasiko nokuthi lifundwa kanjani futhi ledlulselwa kanjani esizukulwaneni esilandelayo. }
Nangu uWanda, nezinwele zakhe ezinhle eziyisihluthu. Unesibindi namandla, kodwa akeneme ngenxa yokuhlale echukuluzwa ngabafana esikoleni. Ngenxa yezimfihlo zikaMakhulu zezinwele nezindaba zakhe, uyakuthokozela ukuthi izinwele zakhe zingumqhele nento angaqhosha ngayo. Le ncwadi ingokuzazi nobuhle, incoma iqholo ngamasiko nokuthi lifundwa kanjani futhi ledlulselwa kanjani esizukulwaneni esilandelayo.